စူပါဟီးရိုးစကားစု ၄၀ | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
အားလုံးနီးပါးသည်လူကြီးများ၊ ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များစူပါဟီးရိုးရုပ်ရှင်များကဲ့သို့သော။ တရားမျှတမှုအမြဲတမ်းအနိုင်ရသည့်ကမ္ဘာ၊ လူဆိုးများအောင်နိုင်သည့်စစ်ပွဲများမရှိသည့်ကမ္ဘာ၊ ၎င်းသည်အမှန်တကယ်တည်ရှိသည်ထက် ပို၍ လုံခြုံသောနေရာဖြစ်နိုင်သည့်ကမ္ဘာတစ်ခုကိုမြင်ယောင်ရန်သူတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီသည်။ အကူအညီ စူပါဟီးရိုးရုပ်ရှင်များတွင်လူကြမ်းများနှင့်တိုက်ပွဲများလျင်မြန်စွာပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည်။
ဤစကားစုများနှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းဆုံးအရာမှာ၎င်းတို့သည်သင့်အားစိတ်ချမ်းသာစေရန်၊ သင်၏ဘဝကိုတိုးတက်စေရန်နှင့်စူပါဟီးရိုးများ၏စကားလုံးများကိုလှုပ်ရှားမှုရုပ်ရှင်များတွင်သာအသုံးပြုသည်သာမက၎င်းတို့သည်ကောင်းမွန်စွာတွေးခေါ်ထားသောစကားစုများဖြစ်ကြောင်းနားလည်ရန်အလွန်လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကြည့်ရှုသူများသည်သူတို့၏ဇာတ်ကောင်များနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟုခံစားရစေရန် scriptwriters များကထုတ်ဝေသည်။
နောက်ပြီးမင်းတို့မြင်တွေ့ခဲ့ဖူးတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေကစူပါဟီးရိုးတွေရဲ့အဆင့်အချို့ကိုပြမယ်။ ဒါပေမယ့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့သူတို့ဟာသင်ကိုစိတ်ကျေနပ်စေမယ့်စကားစုတွေဖြစ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ သင်၏ဘ ၀ သည်မည်မျှရှိသည်နှင့်တစ်နေ့တာ၏မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုတိုးတက်ရန်သင်လိုအပ်သည့်အရာများအကြောင်းအနည်းငယ်စဉ်းစားပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးဘီဘင်တွေကိုမင်းကသိပ္ပံလို့ခေါ်တယ်။ ငါနှစ် ဦး စလုံးတူညီတဲ့နေတဲ့ပြည်ကလာတယ်
သူတို့ကိုယ်သူတို့တိုက်ခိုက်ရန်မတတ်နိုင်သူများအတွက်ငါတိုက်ခိုက်ရန်ဆန္ဒရှိသည်။ -Diana Prince (Wonder Woman)
ဒီဟာမတော်တဆမှုတစ်ခုပါ Hulk သည်မှားသောအချိန်တွင်ပေါ်လာသည်။ ဘရုစ် Banner (Hulk)
ဒိုင်ယာနာ၊ ငါယုံကြည်တာကိုသာပြောပြနိုင်တယ်။ လူသားတို့၏ကိုယ်ပိုင်ကံကြမ္မာကိုတက်ခွင့်ပြုရမည်။ ငါတို့အဲဒီမှာသူတို့ကိုမရဘူး။ -Superman
ကံကြမ္မာကကတ်ပြားတွေကိုသတ်မှတ်ပေးတယ်၊ သူတို့ကိုအကောင်းဆုံးနည်းနဲ့သာကစားနိုင်တယ်။ -Volverine
ငါတို့ကိုယ်ပိုင်နတ်ဆိုးတွေဖန်တီးတယ်။ -Hombre de Hierro
တိုက်ပွဲတွေကမင်းကိုသူရဲကောင်းမဖြစ်စေချင်ဘူး။ -Wonder Woman
သင့်ကိုအဘယ်သူပြောသနည်း။ ငါအဲဒီမှာအင်အားအကောင်းဆုံးဖြစ်၏ -Hulk
တောက်ပသောနေ့၊ အမှောင်မိုက်ဆုံးသောညတွင်ကျွန်ုပ်၏စောင့်ကြည့်မှုဘေးမှလွတ်မြောက်မည်မဟုတ်။ မကောင်းသောအမှု၏တန်ခိုးကိုကိုးကွယ်သောသူတို့အား။ ငါ၏အစွမ်းသတ္တိကိုကြောက်ကြလော့။ - အစိမ်းရောင်မီးအိမ်
တစ်စုံတစ် ဦး ကထိ မိ၍ လဲပြီးလမ်းပျောက်သောကြောင့်သူတို့သည်ထာဝရဆုံးရှုံးသွားသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ တခါတရံမှာငါတို့ရှိသမျှသည်အနည်းငယ်အကူအညီလိုတယ်။ Charles Xavier (ပါမောက္ခ X)
ကျွန်တော့်နာမည် Tony Stark ပါ။ မင်းကိုမကြောက်ဘူး၊ မင်းကသူရဲဘောနည်းနည်းပဲ။ ဒါနဲ့ငါသေပြီမင်းဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ -Hombre de Hierro
၎င်းသည်ထိုက်တန်ခြင်းမဟုတ်ဘဲယုံကြည်သောအရာဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ငါချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုယုံကြည်တယ်။ -Wonder Woman
ငါကမြေကြီးကိုမအုပ်ချုပ်ဘူး။ ကောင်မလေးကိုနောက်အိမ်တစ်အိမ်နဲ့လက်ထပ်ပြီးဆင်ခြေဖုံးမှာနေချင်တယ်။ -Dynamo
ကျနော့်အမြင်တွင်ဘဝတည်ရှိမှုသည်အလွန်အမင်းမြင့်မားသောဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ -Dr မန်ဟက်တန်
သခင်ယေရှုကိုတွေ့ပြီးနောက်မှာတော့သူကလူနည်းနည်းလေးပဲလို့ရိုးရိုးသားသားပြောနိုင်ပါတယ်။ -Jesse Custer
ပြီးတော့ဒီမြို့မှာမျက်နှာမပြရဲတဲ့နေရောင်လိုပဲအမည်းရောင်စိမ်းနေပြီ၊ ပျော်ရွှင်မှုနဲ့မဟုတ်ဘဲပြုံးလိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါသိလို့ ... တစ်နေ့မှာတော့ငါလုပ်စရာမရှိတော့ဘူး ဒီ တစ်နေ့ကျတော့သူကတိုက်ခိုက်တာကိုရပ်လိုက်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်နေ့မှာ ... ငါအနိုင်ရလိမ့်မယ်။ တစ်နေ့နေ့မှာနာကျင်မှု၊ ဆုံးရှုံးမှုမရှိ၊ ရာဇဝတ်မှုလည်းမရှိတော့ဘူး။ ငါ၌ရန်ဘက်ပြုသောကြောင့်၊ တစ်နေ့မှာအနိုင်ရလိမ့်မယ်။ -လင်းနို့လူသား
ကံကြမ္မာကသင့်သူငယ်ချင်းကိုဒီမနက်မှာ ၀ တ်နေပြီ။ အခုတော့ကြောက်စိတ်ကမင်းဘောင်းဘီကိုချွတ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ သင်အရှုံးပေးလိုက်လျှင်သင်အရှုံးပေးလိုက်လျှင်သင်၏အဖိုးတန်နားကပ်ကိုပြုံးရယ်နေပြီးထိုတွင်ရပ်နေသောကြောက်လန့်ခြင်းနှင့်အဆုံးသတ်သွားလိမ့်မည်။ -Tick
အချို့သော bastards များသည်အမြဲတမ်းရေခဲစကိတ်စီးရန်ကြိုးစားနေသည်။ - Blade
သင့်ကိုပေးစရာတစ်ခုခုရှိတယ်။ ငါအဲဒါကိုမလိုချင်ဘူး တစ်နာရီနာကျင်မှုသုံးဆယ်, သင်တို့အားလုံးအတွက် - နာကျင်မှု
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမြဲတမ်း Fox ဆိုတာအမြဲရှိရမယ်။ တစ်နေ့နေ့မှာသူလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုထပ်တွေ့ ဦး မှာပါ။ -El Zorro
ငါငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အော်ဟစ်သောသတ္တဝါအပေါင်းတို့အဖြေဖြစ်၏။ ငါအပြစ်မဲ့၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖြစ်၏ ငါသည်မှောင်မိုက်၌ရှိသောအလင်းဖြစ်၏။ ငါမှန်တယ် ကောင်းသောယောက်ျားတွေမှမဟာမိတ်။ သင်အတွက်အိပ်မက်ဆိုး။ -Goku
သငျသညျရန်သူနှင့်အတူပရောပရည်ကြပါဘူး။ ကိုယ်တော်သည်သူတို့ကိုဖျက်ဆီးတော်မူ၏။ -Raphael (The Ninja လိပ်)
ဒါလွတ်လပ်မှုမဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံသားအားလုံး၏ခေါင်းကိုသေနတ်ဖြင့်ချိန်။ လုံခြုံရေးလမ်းကြောင်းဟုခေါ်သည်
ဘဝ၌တစ် ဦး တည်းသာသေချာသည်။ အားကြီးသောသူသည်ထိပ်ပေါ်မှာရပ် နေ၍ အရာခပ်သိမ်းကိုအောင်တတ်၏ ။- Vegeta
ကျွန်တော့် ဦး လေးကလူတွေကိုသူတို့ရဲ့အရည်အသွေးတွေကိုချစ်မြတ်နိုးတယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုသူတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုချစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ ငရဲကောင်
ဒီတော့ဒီမှာငါတို့ - သူခိုး၊ လူရမ်းကားနှစ် ဦး၊ လူသတ်သမားနှင့်အရူးတစ်ယောက်။ နဂါးငွေ့တန်း၏မကောင်းမှုကိုအဆုံးသတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါ။ ငါတို့အတူတူတည်းနေတာပါပဲ Star Lord
တစ် ဦး ကလူတစ် ဦး ခြားနားချက်စေနိုင်သည်။ Daredevil
ငါခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူး။ အခြားရွေးချယ်စရာမရှိသောကြောင့်ငါလာသည်။ ငါ့အိမ်ကို၎င်း၊ ငါချစ်သောသူတို့ကို၎င်းကယ်လွှတ်ခြင်းငှါငါလာသတည်း။ ရေတံခွန်
ထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုခုမဖြစ်ခဲ့ရင်ဆိုးဝါးတဲ့ပျင်းစရာကောင်းတဲ့ဘဝဖြစ်လိမ့်မယ်။ ရှားပါးသူများသည်ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲပစ်သူများဖြစ်သည်။ Dr. Strange
ကမ္ဘာကြီးကြောက်စရာပါ။ လူတွေသေကုန်ကြပြီ၊ Flash
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်လှပသောအရာဖြစ်သည်။ သင်တွေ့သောအခါကမ္ဘာတစ်ခုလုံးသည်အရသာများကဲ့သို့အရသာရှိသည်။ ရေကန်သေ
သူကကျွန်တော့်ကိုမိုက်မဲတဲ့တိရိစ္ဆာန် Quill လို့ထင်တယ်။ သူကကျွန်တော့်ကိုကြွက်လို့ခေါ်တယ်။ သူကငါ့ကိုခေါ်တယ်။ ငါပြုခံရဖို့မမေးခဲ့ဘူး! ငါဖြတ်ခြင်းနှင့်ပူးပေါင်းခံရဖို့မမေးခဲ့ဘူး။ သင်၏မျက်နှာ၌ရိုက်ချက်အနည်းငယ်နှင့်သင်မည်သို့ရယ်နေသည်ကိုကြည့်ကြပါစို့။ ဒုံးပျံ
အမှန်တရားသည်အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူအားလုံးအတွက်အချိန်မဟုတ်ပါ။ ထိုအငါ့အဘို့။ အနက်ရောင်မုဆိုးမ
ငါတို့မှာရွေးချယ်စရာမရှိဘူး။ ဒါကြောင့်ငါတို့တိုက်ခိုက်တယ်၊ ရွေးချယ်စရာမရှိတော့ပါ။ ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » သင့်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးမည့်စူပါဟီးရိုးစကားစု ၄၀